Nagu saabsan - Hebei Senton International Trading Co., Ltd.
Hebei Senton waa shirkad xirfadlayaal caalami ah oo ganacsi ku leh Shijiazhuang, Shiinaha. Ganacsiga ugu waaweyn waxaa ka mid ah cayayaan dilista guryaha, sunta cayayaanka, xannaanada xoolaha, xakamaynta duullimaadka, API & Intermediates. Ku tiirsanaanta lammaanaha muddada-dheer iyo kooxda khibradda leh. Waxaa naga go'an inaan siino alaabada ugu haboon iyo adeegyada ugu fiican si aan ula kulanno baahiyaha macaamiisha ee isbedelaya. Daacadnimo, u hurid, Xirfad, Karti waa mabaadi'deena aasaasiga ah, taas oo ah xaalad ganacsi. Waxaan ku dhaqannaa anshaxa ugu sarreeya. HEBEI SENTON, Lammaanahaaga la isku halleyn karo, aan u wada shaqeyno mustaqbal wanaagsan!
2004: Shijiazhuang Euren ganacsiga co., Ltd. waxaa loo aasaasay mid ka mid ah ganacsiyada ugu horreeya ee soo dejinta iyo dhoofinta Shiinaha.
2009: Senton caalami xaddidan ayaa laga sameeyay Hongkong iyada oo ah ballaarinta ganacsiga iyo isbeddelka baahida suuqa.
2015: Hebei Senton ganacsiga caalamiga co., Ltd. waxaa dhowaan laga aasaasay Shijiazhuang Hebei China, oo ay maalgashadeen Euren (CHINA) iyo Senton (HK) si loo horumariyo suuqyada caalamiga ah.
Nidaamka Bixinta: Nidaam ayaa loo sameeyay si loo hubiyo tayada wax soo saarka maaddaama maadada ay aasaas u tahay wax soo saar, habraaca kormeerka aqbalaadda, kormeerka qalabka ayaa loo baahan yahay iyo codsi qalab tayo leh ayaa la heli karaa oo keliya marka la xaqiijiyo ka dib.
Nidaamka Maareynta Wax soosaarka: Sharci ayaa loo sameeyay si loo hubiyo tayada wax soo saarka maaddaama maadada ay aasaas u tahay wax soo saar, habraaca kormeerka aqbalida, baaritaanka qalabka ayaa loo baahan yahay waxaana la adeegsadaa agab u qalma oo keliya marka la xaqiijiyo kadib
Nidaamka QC: Dhamaystirka nidaamka keydinta xogta elektarooniga ah,
Nidaamka wax soosaarka: Maaddaama hawsha aqbalidda la sii wado, Shaqaalaha ku jira bakhaarka waa inay baaraan si loo xaqiijiyo in calaamaddu ku sugan tahay xaalad wanaagsan oo nuxurka calaamaddu ay tahay mid leh macluumaad buuxa, Hubinta nidaamka waa in loo fuliyaa xaqiijinta in alaabtu aysan saamayn qoyan ama gooryaanka ay waxyeelleeyeen marka la barbardhigo warqadda baaritaanka wax soo iibsiga iyo COA ee laga helayo alaab-qeybiyaha oo ay ku jiraan macluumaadka magaca sheyga, qeexidda, tirada, tirada dufcadda iyo macluumaadka alaab-qeybiyaha. Shaqaalaha bakhaarka ayaa loo oggol yahay inay diidaan alaabada laga reebay oo ay u sheegaan qofka masuulka ka ah wax iibsiga.
Nidaamka baaritaanka kahor dhalmada
Nidaamka iibka kadib
Nidaamka Maareynta Wax soo saarka
Waxaad nagala soo xiriiri kartaa qaababka soo socda.